Miasa mangina amin’ ny hafa ny fitondran-tena tsara ao an-tokantrano
"Mahereza ary aoka hitombandahy isika "- 1 Tant. 19:13a
Tian ny Mpamonjy So tontolo So ny hanomezan'ny ankizy sy ny tanora ny fon'izy ireo ho Azy (...) Ho hita fa mpianatry ny Tompontsika mahatoky izy ireo mandritra ny fahazazany sy ny fahatanorany (...) Mety ho fitahiana ao an-tokantrano ianareo amin'ireo taona voalohany inchindra eo amin'ny fiainanareo. - Y1, 10 Aogositra 1893. Na dia amin'ny alalan'ny ankizy sy ny tanora aza, dia mety hamiratra amin'ireo izay mitoetra ao amin'ny haizina ny fahazavan' aina. Dia miambena sy mivavaha avy eo, ka inaha7oa fanandramana manokana ny amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra. Mety hampianatra anareo ny ray aman-dreninareo, mety hiezaka izy ireo hitarika ny tongotrareo ho eo amin'ny lalana azo antoka; swingy tsy efan'izy ireo ny manova ny fonareo. Tsy maintsy omenareo an'i Jesosy ny fonareo, ka mandeha amin'ny hazavana sarobidin'ny fahamarinana izay nomeny anareo ianareo. Raiso amim-pahatokiana ireo andraikitrareo ao amin'ny fiainan-tokantrano, dia hitombo ho amin'ny fahafenoan'ny toetra izay tian'i Kristy hitomboan'ny ankizy ao aminy ianareo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra (...) Amin'ny andron'ny fahazazanareo sy ny fahatanoranareo, dia mety hanao fanandramana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianareo. Ataovy izay zavatra fantatrareo fa marina. Aoka ho mpankato ny ray aman-dreninareo ianareo. Henoy ny torohevitra omeny; satria rain tia sy matahotra an'Andriamanitra izy ireo, dia apetraka amin' izy ireo ny andraikitra hitaiza sy hamolavola ary hanomana ny fanahinareo ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raiso amim-pankasitrahana ny fanampiana izay tiany hatolotra anareo, ka ampifalio ny fon'izy ireo amin'ny fileferanareo amim-pifaliana amin'ny baiko omen'izy ireo, araka ny fisainana hendry kokoa ananany. Toy izany no hanajanareo ny ray aman-dreninareo sy hanomezanareo voninahitra an'Andriamanitra, ary hahatonga anareo ho fitahiana ho an'ireo izay mifanerasera aminareo. - YI, 17 Aog6sitra 1893. Tiantsika ho sambatra eo amin'izao fiainana izao ny ankizy sy ny tanora, ka hitondra izay rehetra mahatonga ny lanitra hampitsiriritra — dia toeram-piadanana sy fahasambarana fara tampony — ho ao amin'ny fiainan-tokantrano. Zaro ny tenanareo hitondra tena ao an-tokantrano, manana ny fahatahorana an'i Jehovah eo anatrehanareo, dia ho lasa fahazarana ny fitondran-tena tsara rehefa miala ao an-tokantrano ianareo (...) Aoka hankamamiana ny fitiavana sy ny fiadanana ary ny fahalalam-pomba kristianina, dia ho vahininareo ny anjely. - Y1, April 14, 1886.